राजेश हमालको विहे भोलि, कत्रो होला जन्तीको टोली ? « Mazzako Online
राजेश हमालको विहे भोलि, कत्रो होला जन्तीको टोली ?
महानायक राजेश हमालले भोलि (शनिवार) हिन्दु परम्परा अनुसार विवाह गरेर प्रेमिका मधु भट्टराईलाई घर भित्र्याउदैछन् । उनको विहेमा को को जन्ती जालान् ? जन्ती कत्रो होला ? कहाँ देखि कहाँ सम्म जालान् जन्ती ? यसबारेमा अनुमान लगाउन भन्दा बढी केही भन्न सकिन्न । किनकी हमालको विहे कुन ठाँउमा कसरी गरिदैछ भन्नेबारेमा केही बताईएको छैन ।
यसअघि जेठ १४ मा विवाह गर्ने बताईएपनि जेठ १० गते नै उनी विवाह बन्धनमा बाधिन लागेका हुन् । परिवारका सदस्य र एकदमै निकट साथीहरुको मात्र उनको विवाह उपस्थिति हुने जानकारीमा आएको छ ।
उनले भोली विवाह गर्दैछन् भन्ने खबर बाहिरीएपनि उनको विवाहको लोकेसन गोप्य राखिएको छ । उनको विवाह लामो नहुने पनि बताईएको छ । उनको विवाहमा मिडियालाई कुनै पनि दृश्यहरु कैद गर्न दिईनेछैन । विवाह पछि हमाल परिवारले मिडियालाई तस्वीरहरु उपलब्ध गराउनेछ ।
हमालको विवाह १० गते हुने भएपनि विहेको पार्टी भने उनले १४ गते दिदैछन् । रिसेप्सन पार्टीको दुईदिनपछि नै महानायक हमाल मधुलाई एक्लै छाडेर अष्ट्रेलियाको लागि उड्नेछन् । अष्ट्रेलियामा उनी लगभग १५ दिन बस्ने योजनामा छन् । अष्ट्रेलियाबाट फर्किएपछि मात्रै उनको हनिमुन ट्रिपको योजना बनाउनेछन् ।
महानायक राजेश हमाल र मधु भट्टराई विगत ९ बर्षदेखि सम्बन्धमा रहेका थिए ।